Khin Ma Ma Myo's Blog: ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေး မူဝါဒများ
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေးအတွက် စီးပွားရေး တိုးတက်မှု (economic growth) ဟာ လိုအပ်ချက်တရပ် ဆိုတာကို ဘောဂဗေဒ ပညာရှင် အများစုက လက်ခံထားကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့် စီးပွားရေးတိုးတက်မှု ဖြစ်ထွန်းလာတာနဲ့အညီ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများရဲ့ ၀င်ငွေတိုးတက်လာမှုလဲ ရှိနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အချို့နိုင်ငံများမှာ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုနှုန်း (economic growth rate) မြင့်တက်လာပေမယ့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများရဲ့ ၀င်ငွေတိုးတက်လာခြင်းမရှိပဲ၊ ချမ်းသာသူများရဲ့ ၀င်ငွေကသာ တစထက်တစ ပိုမိုများပြားလာတတ်တာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေတွေ ဖြစ်ပွားလာတဲ့အခါ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုဟာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအတွက် ဦးစားပေးသော တိုးတက်မှု (pro-poor growth) ဖြစ်လာဖို့အတွက် မူဝါဒရေးရာ ပြင်ဆင်ညှိနှိုင်းမှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
(၂၀၀၂) ခုနှစ်မှာ ဘောဂဗေဒပညာရှင် David Dollar နဲ့ Aart Kraay တို့က “Growth is Good for the Poor” ဆိုတဲ့ သုတေသန စာတမ်းကို သုံးသပ်ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။ နိုင်ငံပေါင်း (၁၃၇) နိုင်ငံက ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများရဲ့ (၁၉၅၀) ခုနှစ်မှ (၁၉၉၉) ခုနှစ် အထိ ကာလအတွင်း ၀င်ငွေများ၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုနှုန်း၊ တဦးချင်းဝင်ငွေ စတာတွေအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး လေ့လာသုံးသပ်ချက်အရ ပျမ်းမျှဝင်ငွေ (average income) မြင့်တက်လာရေးကို လုပ်ဆောင်တဲ့ မူဝါဒတွေဟာ အောင်မြင်သော ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာများရဲ့ အသက်သွေးကြောဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီမူဝါဒတွေထဲမှာ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို ဦးတည်သော မူဝါဒများ (growth-oriented policies) များအပြင်၊ ပညာရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စတဲ့ မူဝါဒများပါဝင်ပါတယ်။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေး မူဝါဒတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ကဏ္ဍ (၃) ရပ် ခွဲခြားဖော်ပြထားပါတယ်။ ပထမကဏ္ဍကတော့ အခွင့်အလမ်းများ (opportunities) ဆိုင်ရာ မူဝါဒတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသံသရာက ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့အတွက် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေဆီမှာ ရုပ်ဝတ္ထုဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ (material opportunities) ဖြစ်တဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ အကြွေးရယူသုံးစွဲနိုင်မှု အခွင့်အလမ်း၊ ထုတ်ကုန်များ ရောင်းချရန် ဈေးကွက်အခွင့်အလမ်း၊ ကောင်းမွန်သော လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခွင့်အလမ်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲနိုင်မှု အခွင့်အလမ်း စတာတွေအပြင် ပညာသင်ကြားနိုင်မှု အခွင့်အလမ်း၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အခွင့်အလမ်း၊ သန့်ရှင်းသောရေ ရရှိသုံးစွဲနိုင်မှု အခွင့်အလမ်း စတာတွေ ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရေးအတွက် စီးပွားရေးတိုးတက်မှု လိုအပ်ပြီး၊ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုရာမှာ လူတဦးချင်းဖြစ်စေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလိုက်ဖြစ်စေ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းစုကြီးများအနေဖြင့် ဖြစ်စေ ပရိုက်ဗိတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (private investment) အားကောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သို့မှသာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်များပြားလာပြီး၊ labour income တက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပရိုက်ဗိတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အားကောင်းလာဖို့အတွက် တိုင်းပြည်မှာ ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် (good governance)၊ တည်ငြိမ်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ (stable investment rules) နဲက ကောင်းမွန်အသုံးကျသော ဘဏ္ဍာရေး စနစ် (sound financial system) တွေ ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေတွေ ရှိလာဖို့အတွက်က အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်းမွန်မှု၊ ညံ့ဖျင်းမှု အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်ဟာ ပရိုက်ဗိတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို အားကောင်းစေမယ့် အခြေအနေတွေ ဖော်ဆောင်ပေးဖို့ တာဝန်ရှိသလို၊ public investment ပြုလုပ်ဖို့အတွက်လဲ တာဝန်ရှိပါတယ်။ Public investment လုပ်ရမယ့် ကဏ္ဍတွေကတော့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး၊ စာတိုက်၊ ကြေးနန်းနှင့် အင်တာနက် ဆက်သွယ်ရေး တိုးမြှင့်ရေး၊ ပညာရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့နိုင်ငံတွေမှာ ပညာရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုတာကို အသိဥာဏ်ပညာထက် ကျောင်းအရေအတွက် တိုးတက်ရေး၊ ဘွဲ့ရသူအရေအတွက် များပြားရေးစတဲ့ အရေအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဦးစားပေးလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ အရေအတွက်သာမက အရည်အချင်း တိုးတက်မြင့်မားရေးကိုပါ ဦးတည်ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများရဲ့ အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်လာရေးအတွက် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော မိသားစုများမှ ပေါက်ဖွားလာသော ကလေးများ ပညာသင်ဆုများ ရရှိရေး၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ အခမဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခွင့် ရရှိရေး၊ လူမှုအခြေပြု တန်းတူညီမျှခြင်း မရှိသည့် အတွေးအခေါ်များကို ဖယ်ရှားရေး၊ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများတွင် လူမျိုးရေး ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများကို ဖယ်ရှားရေး စတာတွေကို ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုကြောင့် လူမျိုးရေးဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခတွေကနေ ပြည်တွင်းစစ်ကို ဖြစ်ပွားသွားစေတတ်ပြီး၊ ပြည်တွင်းစစ်ဟာ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို နှောင့်နှေးစေတဲ့ အတွက် တိုင်းပြည်တွင်းမှာ လူမျိုးရေး ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေ မရှိအောင် ကြိုးပမ်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေးနဲ့ ပတ်သက်ြ့ပီး ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ချမှတ်ထားတဲ့ ဒုတိယကဏ္ဍကတော့ empowerment ဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုရေးအတားအဆီးများနဲ့ အင်စတီကျူးရှင်းဆိုင်ရာ အတားအဆီးများကြောင့် မူဝါဒချမှတ်ရေးဖြစ်စဉ် (policy making process) မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေကို ကိုယ်စားပြုမှု အားနည်းချက်တွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ empowerment ဆိုတာမှာ သတင်းအချက်အလက်များကို သိရှိရယူနိုင်ခြင်း (access to information)၊ inclusion and participation ၊ တာဝန်ခံမှု (accountability) နဲ့ နယ်မြေဒေသအလိုက် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်မှု စွမ်းရည် (local organizational capacity) စတဲ့ အချက်အလက် လေးမျိုးပါဝင်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်ရဲ့ အင်စတီကျုးရှင်း အားလုံးဟာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအပေါ် တာဝန်ခံမှု ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တာဝန်ခံမှု ရှိဖို့အတွက် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေမှာ သတင်းအချက်အလက်တွေကို သိရှိနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလို နားလည်သိရှိမှလဲ မူဝါဒရေးရာ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်မှုတွေမှာ တက်တက်ကြွကြွ ပူးပေါင်းပါဝင်လာကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ပူးပေါင်း ပါဝင်လာကြခြင်းအားဖြင့် လူမှုအရင်းအနှီး (social capital) မြင့်တက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုအရင်းအနှီး မြင့်တက် လာတာနဲ့အမျှ လူမှုအင်စတီကျူးရှင်း အားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။ လူမှုအင်စတီကျူးရှင်း အားကောင်းမှုဟာ ဆင်းရဲ နွမ်းပါးမှု အစီအစဉ်ဒီဇိုင်းများနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှုများ ပိုမိုထိရောက်မှု ရှိစေတဲ့အတွက် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေးကို အထောက်အကူပြုလာပါတယ်။
သတင်းအချက်အလက်များ ရယူနိုင်မှု မြင့်မားလာရေးအတွက် စာနယ်ဇင်းနဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ တိုးမြင့်လာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေ ကြုံတွေ့ချိန်မှာ လွတ်လပ်စွာ သတင်းစာထုတ်ဝေမှု အားကောင်းတဲ့ နိုင်ငံတွေက ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေဟာ ပိုပြီး ထိရောက်မှုရှိကြောင်း ပညာရှင်များက လေ့လာတွေ့ရှိ ခဲ့ကြပါတယ်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းလာစေဖို့အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်မှုနဲ့ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ချက်တွေကို စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတွေမှာ ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ ရသော democratic mechanisms တွေ ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
တာဝန်ခံမှု အားကောင်းလာစေဖို့အတွက် အစိုးရရဲ့ ဘတ်ဂျက်ခွဲဝေသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် စာအုပ်များ ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ပြည်သူ့ရေးရာဌာနများရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို လေ့လာအကဲဖြတ်နိုင်သော Institutional and Governance Reviews များ ထုတ်ဝေခြင်း၊ အစိုးရ၀န်ဆောင်မှုများရဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ လုပ်ဆောင်ရည်ပေါ်မှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ အတွေးအမြင်တွေကို ဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့ Citizen Report Cards များ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လမ်းပြမြေပုံများ (Investment Roadmaps) များ ချမှတ်ရေးဆွဲခြင်း၊ focus groups နဲ့ အင်တာဗျူးများကို အသုံးပြုပြီး Participatory Poverty Assessments များ ပြုလုပ်ခြင်း စတာတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မူဝါဒတွေ၊ စီမံချက်တွေကို အကောင် အထည်ဖော်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်မှုစွမ်းရည်တွေ မြင့်မားလာရေးအတွက် လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အားကောင်းလာစေရေး၊ ကျားမတန်းတူညီမျှမှုရှိရေး၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများရဲ့ လူမှုအရင်းအနှီး တိုးတက်လာစေရန် ကွန်ယက်များ ဖွဲ့စည်းရေး စတာတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မူဝါဒတွေ၊ စီမံချက်တွေကို အကောင်အထည် ဖော်လေ့ရှိကြပါတယ်။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေးနဲ့ ပတ်သက်ြ့ပီး ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ချမှတ်ထားတဲ့ တတိယကဏ္ဍကတော့ ၀င်ငွေလုံခြုံရေး (income security) ဖြစ်ပါတယ်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများဟာ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့မှုတွေနဲ့ income shocks တွေကြောင့် ပေါ်ထွက်လာတဲ့ risks တွေကို အခြားသူများထက် ပိုပြီး ခံစားကြရလေ့ရှိပါတယ်။ အိမ်ထောင်စုတွေဟာ သူတို့ရဲ့ risk exposures တွေကို ၀င်ငွေ ရရှိရာ အရင်းအမြစ်များအား ဖြန့်ကျက်ခြင်းနဲ့ အာမခံထားရှိခြင်းများနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဥပမာ- အချို့ မိသားစုတွေက အခြားမြို့များမှာ အလုပ်သွားလုပ်ပြီး အိမ်ကို ငွေပို့ခြင်း၊ ထွက်ကုန်များကို နောက်ထပ် ရာသီတခုအထိ သိုလှောင်ထားခြင်း၊ ရွှေငွေ လက်ဝတ်ရတနာများအဖြစ် စုဆောင်းထားခြင်း၊ အာမခံထားခြင်း စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ အာမခံလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ ဖြစ်စေရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ အာမခံလုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ ထိန်းချုပ်ရေးယန္တရားများ ထားရှိဖို့ လိုအပ်သလို၊ safety nets များလဲ ဖန်တီးပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လုပ်သားဈေးကွက်နဲ့ macroeconomic policies တွေဟာ risk တွေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
economic crises တွေနဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဟာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများကို ရေတိုမှာတင် ထိခိုက်စေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူသားအရင်းအမြစ်နဲ့ သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ရှားပါးပြုန်းတီးမှုတွေကြောင့် ဒီလို Large adverse shocks တွေဟာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေကို ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု သံသရာထဲမှာ ရေရှည်နစ်မွန်းစေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းဆိုက်မှုတွေ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ အရေးကြီးပြီး၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေ ဖြစ်ပွားလာချိန်မှာလဲ လျင်မြန်စွာ တုန့်ပြန်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလို Large adverse shocks ကို ရင်ဆိုင်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အဆင့် စီမံချက်တွေ ချမှတ်ထားခြင်းအားဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ ရင်ဆိုင်ရမယ့် risks တွေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီစီမံချက်တွေမှာ မိုင်ခရိုအာမခံ အစီအစဉ်တွေ၊ အစားအစာ ဖြန့်ဝေရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ public works programs တွေကို လိုအပ်တဲ့ အခြား risk management measures တွေနဲ့အတူ ထည့်သွင်းခြင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ macro shocks များကို ကာကွယ်ရေး အစီအစဉ်များ ချမှတ်ခြင်၊ ပဋိပက္ခ များကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်း၍ ပြည်တွင်းစစ် မဖြစ်ပွားအောင်ကာကွယ်ခြင်း၊ အရင်းအမြစ်များကို ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းဆောင်တာများမှာ အသုံးပြုခြင်း၊ ကူးစက်ရောဂါဆိုးများအား ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေးအတွက် safety nets များ ရှိရေးက အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလို safety nets တွေထဲမှာ ကျန်းမာရေးအာမခံ၊ ပင်စင်လစာ၊ ဘိုးဘွားများအား စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ အလုပ်လက်မဲ့အာမခံ၊ လူမှုဖူလုံရေး ထောက်ပံ့ကြေးနဲ့ အသေးစားငွေချေးစနစ် စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီ safety nets တွေဟာ အရေးပေါ် စားသုံးမှုကို အထောက်အကူပြုရုံမက ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေရဲ့ human, physical, and social assets တွေကိုပါ အကာအကွယ်ပေးပါတယ်။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တကမ္ဘာလုံးက ကိုင်စွဲရမယ့် blue print မရှိသေးပါဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံအလိုက်၊ သင့်လျော်တဲ့ မူဝါဒတွေကို မူဝါဒရေးရာတာဝန်ရှိသူတွေက ရေးဆွဲချမှတ်အကောင်အထည် ဖော်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာမှာ စီးပွားရေးစွမ်းရည် (economic capabilities)၊ နိုင်ငံရေးစွမ်းရည် (political capabilities)၊ လူသားစွမ်းရည် (Human Capabilities)၊ လူမှုစွမ်းရည် (Social Capabilities)နဲ့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစွမ်းရည် (protective Capabilities) တွေ မြင့်တက်လာရေးကို ဦးတည်တဲ့ မူဝါဒတွေကို ဖော်ဆောင်နိုင်မှသာ ပြည်သူအများကို ဆင်းရဲတွင်းကနေ လွတ်မြောက်စေမယ့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေး မူဝါဒများ ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း ရေးသားတင်ပြအပ်ပါတယ်။
ခင်မမမျိုး (၁၅၊ ၇၊ ၂၀၁၁)
Dollar, D, and Kraay, A. (2002) Growth IS Good for the Poor, Development Research Group, World Bank, Washington DC.
Haughton, J. and Khandker, S. (2009) Handbook on Poverty and Inequality, World Bank, Washington DC.
Kraay, Aart. (2004) “When Is Growth Pro-Poor? Cross-Country Evidence.” Working Paper No. 04/47, International Monetary Fund, Washington, DC.
Ravallion, M. (2000) Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Averages, World Bank, Washington DC.